Inoshandiswa pakukuya pakaoma, kubviswa kwepasi kupfeka, epoxy ine yakakwirira inoshanda
Mafomu: yekushandisa pamushini wekukuya, Kurumidza Kubatanidza Kugaya Mashini
Production maitiro: otonhora muchina, inopisa muchina
Giredhi remhando: standard, nyanzvi, maindasitiri
PCD Kuchenesa Kubvisa Plate:inokodzera general (kongiri, dombo) kukuya kushandiswa nepo zvakanyanya zvichishandiswa kupenda, glue, epoxy kubviswa uye kupfeka kwepasi, mhando yepamusoro uye kugona kwakanyanya, hupenyu hwakareba. Uye inoshandiswa pakukuya kwakaomarara, kubviswa kwepasi kupfeka, epoxy uye kupenda PCD mahwendefa. Iyo diki kona, inowedzera simba rekukuya. Uye kukwenya kwacho kwakanyanya uye kwakasimba patanda mushure mekubvisa jasi rekare ivhu.
Kukura: Φ20x5mm +1/2 Φ13PCDx2T
Saizi: -13 PCDx2T + TCT
Kukura: 40x10x10mm 2T, PCD,
Saizi: -13 PCD + TCT
(1) yakanakisa kupfeka kuramba, yakaderera mutengo, zvirinani pevhu kupera.
(2) seyakagadzika uye giraidhi yekudzora inokwenya kwakanyanya kupfeka zvine hukasha
(3) inopa simba uye inobvumidza kuwelda kana brazing nedzimwe simbi
Kucheka kwe:rinoshandiswa Universal uriri vachikuya muchina. Yakagadzirirwa kongiri pasi kudzoreredza, epoxy, glue uye chero imwe kongiri pasi pekupfeka kubviswa. Yekubvisa matema matema. Inobvisa latex, epoxy, yakaoma & yakapfava kupfeka
yakakosha logo, chidimbu saizi uye maumbirwo, kuisirwa kunowanikwa nechikumbiro chevatengi
Inotora kwenguva yakareba kupfuura zvinokwikwidza zvigadzirwa uye haizopenya
Kubatanidzwa kwemadhaimani epamusoro uye yakasimba uye yakasarudzika matrix
Inobvisa stock nekukurumidza uye nemazvo kudzikisira zvakanyanya chigadzirwa chako uye nemutengo wevashandi
mhedzisiro inoshamisa pamhando zhinji dzekongiri kubva kune nyoro kusvika kuomarara zvakanyanya
Yakakwira mhando yehupenyu hwakareba
Yakagadzirirwa kushanda zvine hukasha
Yakatsetseka uye yakaenzana nzvimbo dzakakwirira
Professional PCD kukuya mavhiri
PCD (polycrystalline diamond) yekugaya mavhiri akagadzirirwa kubvisa zvine hukasha nzvimbo dzakaomarara uye dzakaomesesa senge:
Kudzivirira mvura membrane
Pool deck kupfeka
VCT / kapeti zvinonamira
Professional Fan mhando PCD kukuya mavhiri
Dia Seg.Size Kwete.
Profess1 / 2 PCD kukuya mavhiri
Nyanzvi 1/4 PCD kukuya mavhiri
Professional multhole PCD kukuya mavhiri
Yakasimba kwazvo PCD yakasarudzika vhiri rekukuya
Yakanyatsokodzera roughening uye kukuya inoshanduka inodzivirira kupfeka, adhesives uye zvisimbiso. Kubvisa latex uye pendi yemafuta, bhitumini, PU / polyurethane, epoxy uye zvinonamira zvinonamira. Kugaya lime uye gypsum plaster. Roughening chakaita zvokugadzirwa nebwe varinamire uye zvakaoma simende plaster.
Inokurumidza uye inoshanda kubvisa zvinhu pasina kunamatira, nekuda kwePCD (poly-crystalline diamond) zvikamu
Kunonyanyisa kushanda kumhanya 80 m / s
Pashure: Professional nedhaimani uriri vachikuya ndiro
Zvadaro: Dhaimani rakaoma Core Drill Bits